Maalinta: Ogast 20, 2018
3 oo ka socda wasiirka Turhan. Qeexida shilalka diyaaradaha duulimaadka
M.Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa qiimeyntii ugu weyneyd ku sameeyay garoonka diyaaradaha Yeni Istanbul, Musa Alioglu, garoonka cusub ee Istanbul, wejiga koowaad ee la qorsheeyay in la hawlgaliyo bisha Oktoobar. Wasiir Turhan, duulimaadyada [More ...]
Cufnaanta Cunnada ka hor inta lagu jiro Fırat Express
Xijaabista khidmadaha gaadiidka ayaa muwaadiniinta u horseeday tareenka. Dad badan ayaa u soo duulay dhinaca 'Yufraad' Express 'sababtoo ah waarayaashu. Markay sare u kaca dollarku sababtay koror xad dhaaf ah oo ah ajuurada gaadiidka, [More ...]
Injiilka Waddanka Cusub ee Waddanka
9 maalin walba Ciid Ciidul Adxaa ka hor Izmir (Basmane) –Ske-Denizli qadka tareenka sababtuna tahay cufnaanta xad dhaafka ah ee maraakiibta ayaa lagu dari doonaa wadiiqooyinka si looga hortago muwaadiniinta in la shaaciyo. Markaa, awoodda kuraasta ee Söke waxay ku tababartaa wagag dheeri ah [More ...]
BTSO oo ku dhawaaqay baadhitaan rasmi ah ee 250
BCCI, taas oo ah mid ka mid ah hawlaha keentay Turkey ee duurka iyo Nuur on dhaqaalaha ee magaalada '250 shirkadda ugu horeysay weyn daadisa - 2017 ayaa ku dhawaaqay natiijada cilmi. Shirkadda ugu horreysa ee 250 ee ku taal Bursa ayaa la taxay, isku darka [More ...]
MOTAS oo ku dhawaaqay sifo dheeraad ah si loo kordhiyo fayodhawrka
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalaweynta Malatya iyo Adeegyada Gaadiidka Dadweynaha MOTAS Agaasinka Guud wuxuu qaaday talaabooyin taxane ah sababtuna tahay Ciidul Adxada soo socota. Qaab dhismeedka qaab dhismeedka waxaa lagu abaabuli doonaa duulimaadyo dheeri ah meelaha xoojinta. MOTAS mawduuca [More ...]
Rakaabka sharafta leh, Fasaxdeena diiniga ah waa maalmaha dareenkeena midnimada iyo wadajirka la xoojiyo, buundooyinka wadnaha waxaa la asaasay, quruxda wadaagida iyo wadajirka ayaa la soo maray. Maalmahan qaaliga ah waxay noqdaan kuwa macno badan marka kuwa aan jecel nahay nala joogaan. TCDD [More ...]
InnoTrans 2018, 18-21 Bandhigga Caalamiga ah ee Nidaamka Tiknoolajiyadda Tareenka iyo Gawaarida ayaa lagu qaban doonaa magaalada Berlin, Jarmalka laga bilaabo Sebtember. Hal-abuurka cusub ee InnoTrans 2018 tikniyoolajiyada tareenka, kaabayaasha, dhismaha tunnel-ka iyo gaadiidka rakaabka [More ...]
No Tram, laakiin Saxiixa Taasi waa Jidka
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay calaamad u dhigtay joogsiga tareenka wadada inta uusan tareenka imaanin. Calaamadda joojinta ee laga leexiyay ayaa sugaysay in dhulka laga saaro maalmo. Wadada tareenka ee bartamaha magaalada waxaa dheereyn doona Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli. [More ...]
Prometeon, oo ah shirkadda kaliya ee adduunka ee diiradda saareysa taayirrada warshadaha, shirkadda soo saarta ruqsadda leh ee taayirrada taayirrada iyo ganacsiga ee Pirelli, ayaa dhammaystirtay Wadada 3 Truck Cooperatives Roadshow sannadkan. 9 oo leh hal-ku-dhigga ız Waan kula jirnaa duruufaha oo dhan ” [More ...]
Yavuz Sultan Selim iyo Osmangazi buundooyinka waaxda gaarka loo leeyahay, wadada Eurasia Tunnel iyo wadada isku xirta Istanbul-Izmir ee isticmaalka amaahda lacagaha qalaad ee bangiyada, waajibaadka maaliyadeed ee kala guurka TL ayaa yiri. Turkiga [More ...]
Dowladda hoose ee Manisa, oo iskudayeysa inay sare u qaaddo heerka daryeelka muwaadiniinta iyo hirgalinta ay hirgalisay, waxay baaritaan ku sameysay gawaarida adeega iyadoo la adeegsanaayo baaxadda J plate, oo ujeedadeedu tahay inay ka hortagto gaadiidka sharci darrada iyadoo bilaabeysa hirgelinta sanadihii ugu dambeeyay. [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, IZBETON'daki oo kaqeyb galaya munaasabaddii dhaweyd ee magaalada oo dhan ayaa kahadlaysa howlaha dhirbaaxada. İZBETON, oo ka mid ah shirkadaha Metrozmir Metropolitan Dowlada Hoose, ayaa soo wada urursaday dhamaan shaqaalaheeda kulanka xaflada. [More ...]